Bathi ubuhle kudinga ukuzidela. Kodwa kungani kungalendlela? Ayikwazanga thina nje uthathe isikhashana futhi babe bahle? Amadoda ngokwabo zafakwa yinqwaba, efana Heroine i dream endala ifilimu? Phela, osomabhizinisi ukwakha isu yabo ibhizinisi ivuliwe izakhiwo womuntu futhi isifiso bebangalasa uthole isesimweni ngaphandle umzamo. Ngakho-ke, ithandwa kangaka kwaba "iSiphepho" - neminye itiye, okuyinto ugcwele izibuyekezo izinkundla.
Itiye ukwehla kwesisindo emzimbeni?
Singakhumbula lwamancoko ubudala lapho iqhawe wacabanga ukuthi kukhona ukudla ukuze ngehlise umzimba? It kuvela ukuthi kukhona imikhiqizo okuthiwa negative ukudla calorie ezingavikelekile amuncwa wumzimba, ngakho silahle ezinhlangothini. Kodwa ezingabazisayo kakhulu futhi ngokuvamile kuphela etholakalayo kwesisindo inketho kukhona iziphuzo ekhethekile. itiye herbal ngagama ezimbi "iSiphepho" ivela emalini esitolo amashalofu isikhathi eside. On the isembozo akubiza smiling ubuhle abasha bonke hlobo kuqinisekisa ukuguqulwa leso futhi ujabule ekuphileni siqu. Futhi uma sinake okhalweni emide emincane, yena ovele wadonsa santimentrom, noma ngisho nje ufuna ukuphuza lonke iphakethe ilindele isimangaliso.
Ngaphambi Shell out imali umkhiqizo, kungaba kuhle ukufunda ngezithako zawo. Njenganoma yini esolisayo iqukethe itiye herbal elisetshenziselwa ukunciphisa umzimba, "iSiphepho". Ukuhluzwa kwemibhalo kuwo oredelennoy njengoba kuyiqiniso, njengoba lomthengi ka laxative zemvelo. Yonke indawo ungakwazi bazithole ukubuyekezwa komkhiqizo abathengi ukunambitha itiye kungenziwa ngokuthi othize, kodwa isenzo akakuthandanga lokho, ngoba, ngaphezu enkanukweni njalo yokugezela, kwakungekho umphumela. izakhamuzi Right Kungakhathaliseki abakhuluma kabi itiye? Eqinisweni, kukhona nkohliso: ku itiye - oqoshiwe izimbali Mallow, rose okhalweni, utshani lemongrass, itiye Senna futhi Yerba mate. Zonke ndawonye noma ngokuhlukana, lezi izithako nethonya laxative, amandla yokukhuluma zazo kuncike inani ukudla washisa. Kuphela ukukhangisa rant mayelana itiye izinqubo okumelwe isetshenziswe. Yini impendulo kungase uthole ngisho laxative yemvelo?
Ngokuvamile, kuba ibhekwa wezokudla ekudleni, okungase empeleni babe umthombo flavonoid kanye arbutin anthraquinone kulabo sihlose kwesisindo enempilo. Kodwa musa lizotholakala umphumela ngokuyisimangaliso aphuza itiye wedwa. Uma uhlela ukuba zama itiye "iSiphepho" elisetshenziselwa ukunciphisa umzimba, nezimpendulo ezintsha kufanele kube yiphuzu lakho, kodwa umhlahlandlela esenzweni. Zama itiye Kunconywa ukuba baphuze akusiyo njalo futhi alinganisiwe. Ekuqaleni, omunye nje inkomishi ngosuku. Uphenyo itiye izinqubo okumelwe Golden Ipulazi "iSiphepho" zifana eqinisweni lokuthi umkhiqizo kuyasiza kulesetayelekile ukugaya futhi umzimba, upholisa abese ephumula. umphumela imithi yokuhlambulula isisu, ngokuvumelana amaphaneli, kukhona, kodwa kungenye into ehluke obucayi soft. Ngemva Yiqiniso yokwamukela itiye abantu ukujwayela bangaya endlini lencane nsukuzonke futhi baqiniseke ukuthi izinga ukugaya is kungabi sengozini.
Kungakhathaliseki kukhona ukulahleka isisindo?
Singasho ngokuqiniseka futhi ukuthi ulahlekelwe kusukela itiye eyodwa engenakwenzeka. Yiqiniso, kunabantu olukhulu abaphuza izinyanga, "iSiphepho" (itiye izinqubo okumelwe), ngempela ke omubi ishiywa, ngoba inqubo ukulahlwa isisindo okweqile abahambanga, kodwa ukhohlwe ukuthi nje ibhekwa yokudla, kanye hhayi isisekelo salo. Uma ikhono lomuntu ukuze kabusha uqobo futhi ekhipha kusukela ekudleni slag odla umzimba, itiye anganika push ukukhuthaza. Itiye, ngasendleleni, kuyinto ehluke kilojoule, lapho 70,4 cc 100 grams ngasinye, ngakho ukuhileleka - esengozini ethu. Ukuze nomdlandla kakhulu mangisho ukuthi BZHU isilinganiso lapha - 5.3 / 1.1 / 11.2.
Yenza njengoba itiye elivamile? Ungase, kodwa-ke kulula kakhulu, ngoba impela sachet noma itiye spoon uthele amanzi abilayo wasiqashisa yenza. Ngokusemthethweni Kunconywa ukuphuza itiye kabili ngosuku for isigamu sehora ngaphambi kokudla. Ukwamukelwa Inkambo ihlala ngenyanga. Kodwa kancane faka into eyodwa, kungcono ukuqala nedili lomshado nabo ingilazi ngosuku, kuyilapho izinga elula ezinyangeni ezimbili. Abesifazane abakhulelwe lactating akufanele bathathe 'iSiphepho ".
Neminye Tea Izibuyekezo iqoqa ezahlukene, kodwa bonke bayavumelana ekutheni ukuqokwa umkhiqizo elinjalo - kukhethwa ngamunye, ngoba komzimba nezinto, luvelo izingxenye ngabanye. Kungcono uyeke ukwamukela abantwana kuze iminyaka 14. Umthelela itiye kuyoba obonakalayo cishe ngokushesha - esesuthi encishisiwe, isisu kusebenta ngekukhutsala. Lokhu kuchazwe isenzo eziyinkimbinkimbi izingxenye isitshalo-etholakala.
Lotus icabunga ukwakheka ukunikeza itiye flavour ekhethekile. Kusukela ezikhathini zasendulo le-lotus iphathwa kanye nokuqinisa umzimba, njengoba nje iye imiphumela ezuzisayo phezu kwesibindi, nezinso ubende. Namuhla, inciphise amafutha egazini. itiye Mate lichaza ekwakheni ihlinzeka lipolysis okusheshayo kulandele kokuphothulwa ibhalansi izakhi emzimbeni. Healing itiye hibiscus futhi okuyindawo ehlanganisa umthamo omkhulu of acid eziphilayo kanye amavithamini kanye ukuvimbela lokudakwa umzimba. Exotic ezweni lethu lemongrass empeleni ngeke umelekeleli kwezemidlalo umkhuba, kusukela utshani lemongrass inyuka amandla, kuqinisa nemisipha kanye nemisipha. Izinzuzo rosehip wonke umuntu oye wezwa kuBaba futhi kusukela ebuntwaneni. It uhlanza umzimba ubuthi, ascorbic acid futhi kunikeza uhla amavithamini kanye amafutha abalulekile. Ngakho, "iSiphepho" - neminye itiye, ukubuyekezwa okuyinto kuphela ingxenye kweqiniso, ngoba nge-umsizi enjalo, ungakwazi ngokushesha ukunciphisa umzimba kuphela uma silinganise kahle usuku lwakho.
Tasters usho itiye enkulu plus herbal in eziningi ezihlukahlukene flavour. Uphayinaphu, orange, sitrobheli - okuyinto nje ayikunikezi "iSiphepho". Neminye itiye Izibuyekezo wathola njengomuthi wokuqinisa nokuhlanza bokuqukethwe koqobo. Nice ukuba isidlo phakathi kosuku, ukudla ayoliswe itiye ocebile. Phela, ukuze kuzuzwe isisindo oyifunayo futhi kulula ngakho, futhi uma ususa konke ukunambitheka ekudleni, ngeke ukwazi ukuphila. Ngakho-ke, bafowethu neminye futhi intsha kudingeka uziphe nezinjabulo encane gastronomy. Ukudla kanye ngakho buzoba buncane ngenxa njalo ukusetshenziswa "iSiphepho" ukuze, uma babefisa, kungaba aphathe ngokwabo ubhanqe amakhukhi, ulethisi ingxenye noma ngisho ikhekhe. Okubaluleke kakhulu, bazi lapho sekuyisikhathi sokuba ayeke futhi siyaqaphela ukuthi itiye herbal ahlanze umzimba wakho kusuka izici ezilimazayo, Ngakho-ke, akufanele yahlukunyezwa sinyatselo lesinjalo, bese uyifaka ukusebenza. Uma umzimba Ufika esetshenziswa, kubalulekile ukwandisa umthamo itiye. Manje ungakwazi baphuze izindebe eziningana ngosuku, ngisho esikhundleni iziphuzo zabo evamile. Kodwa uma ungathathi ikhefu Ngemva nje kokuphothula izifundo, umzimba Ufika yasebenza ngokugcwele, kanye kwalokho ongalamukeli ke, okuyinto sizothinta inqubo esizayo ukuncipha.
Lokhu enkazimulweni ngeke abe mancane emakhulwini eminyaka. Umdwebo "The Conquest yeSiberia ngu Yermak"